एमालेसँग एकता प्रयास अहिले होइन, मदन भण्डारीकै पालादेखि : प्रचण्ड
Fri, Jul 20, 2018 | 07:07:50 NST
18:54 PM ( 8 months ago )
चितवन, कात्तिक २७ – चितवनको शिवनगरमा रहेको आफ्नै निवासमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पचण्डले पत्रकारसँग संवाद गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान पत्रकारसँग निवासमै प्रचण्डले संवाद गर्नुभएको हो । चितवन क्षेत्र नं. ३ मा चुनावमा उम्मेदवार भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
उम्मेदवारको रुपमा चितवन आउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
उत्साह पूर्ण अवस्था छ । पार्टी विशेष भन्दा पनि सबैको उत्साहा देखेको छु । प्रचण्ड चाहिन्छ भन्ने भावनाको विकास भएको पाएको छु । हामी सहयोग गर्छाैँ भन्नेहरु बढ्दै गएका छन् । चितवनमा पार्टीगत गुटगत भन्दा धेरै अगाडि बढेको महसुस गरेको छु । क्षेत्र नं. ३ को ७ वटा वडामा पुगेको छु । अन्य क्षेत्रबाट सकारात्मक रिपोर्टिङ आइरहेका छन् ।
अहिले मेरो खासै प्रतिस्पर्धी यहाँ छैनन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै चुनाव चिन्हमा उम्मेदवार उठाएको भए प्रतिस्पर्धी हुन्थे । कांग्रेसले एकजना ठेकदार विक्रम पाण्डेलाई समर्थन गरेको अवस्था भएकाले अहिले मेरो प्रतिद्वन्द्वी छैन् । यसो त्यसो गर्न लाग्नुभन्दा जे सिक्नुभयो त्यसैको अनुभव भएकाले त्यही काम गर्न लागे राम्रो । विकास निर्माणको काममा राम्रो कन्याट्रक्टर भएकाले ठेकदारकै काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।
राजनीति गर्नेलाई राजनीति गर्न दिए हुन्छ । चितवनका नागरिकले विकास चाहेका छन् । म त्यो पूरा गर्छु । मेरो उमेरको १० वर्ष विचार र संगठन विकासमा बिताएँ, अर्को १० वर्ष गणतन्त्र, समावेशीताका लागि युद्धमा बिताएँ । अर्को १० वर्ष शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयामा बिताएँ । अब १० वर्ष देशको विकासमा बिताउँछु । समाजवादसँगै राष्टिय पुँजीको वृद्धीमा लाग्छु । यही अभियानमा अहिले लागेको छु ।
सहकार्य जोसँग पनि हुन सक्छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने विचार सिद्धान्तको हिसाबले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको एकता कहिल्यै हुनै सक्दैन । एमाले र कांग्रेसबिचको एकता पनि कहिल्यै हुन सक्दैन । एकता हुने भनेको कम्युनिष्ट र कम्युनिष्टको र कांग्रेस र कांग्रेसको बिचमा नै हो । अहिले कम्युनिष्टहरु एक हुन्छौँ भनेपछि कांग्रेसहरु पनि एक हुन थालेका छन् । जस्तै गच्छादारजीहरु पनि मिल्नुभयो । यो त कांग्रेसका लागि राम्रो अवसर पनि हो नि । यसो भनिरहँदा भोलि कांग्रेससँग सहकार्य हुँदैहुँदैन भन्ने होइन । कार्यगत सहकार्य पक्कै हुन्छ ।
तर अहिले देशमा स्थायित्व र स्थिर सरकार चाहिएको छ । आजको आवश्यक यही हो । सबै मिल्ने पक्षहरु मिल्नु पर्छ । नागरिकले राम्रो काम गरे २५ वर्ष जिताउँछन् नराम्रो काम गरे ५ वर्षमा हराउँछन् । विगतको जस्तो छोटो समयमा सरकार ढाल्ने खेल बन्द गराउनकै लागि यो गठबन्धन हो । एमालेसँगको यो एकताको प्रयास अहिलेको होइन मदन भण्डारीकै पालमा प्रयास भएको हो ।
मंसिर ९ गते नै पार्टी एकता हुने भन्ने विषय के हो ?
यो समाचार कसरी आयो म आफै अचम्ममा छु । कहिले काहीँ मिडियामा नभएका समाचार आउदा भाइरल पनि बन्ने गरेको छ । यो होइन । चुनावपछि मात्र पार्टी एकता हुन्छ । पार्टी एकता गर्ने विषयमा शंका छैन तर चुनाव लगत्तै हुन्छ ।
चितवनलाई वैकल्पिक राजधानी बनाउने अभियानमा तपाईंको पनि साथ थियो, तर अहिले देशको राजधानी त के प्रदेशको राजधानीको विषयमा समेत चितवन चर्चामा रहेन । तपाईँको धारणा के हो ?
चितवन राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्ला हो । भूगोलविद लगायत धेरै विशेषज्ञको सुझाव राम्रै छ । चितवन सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर अहिले चुनावाको मुखमा ठोस रुपमा भन्ने आधार तय भइसकेको छैन् । पछि रेल मार्ग, सुरुङ मार्ग लगायतका संरचना बनिसकेपछि सबैले भन्छन् कि चितवन नै राजधानी हुनुपर्छ । प्रदेशको राजधानीको विषयमा पनि छलफल भइरहकै छ ।
तालमेलको प्रभावलाई कसरी आंकलन गर्नुभएको छ ? विगतमा त तालमेल त्यति प्रभावकारी देखिएन त ?
तालमेल सफल रुपमै अगाडि बढेको छ । आम नागरिकमा खासगरी वामपन्थीहरुमा उत्साह छ । सुरुमा पार्टी भित्र टिकटलगायतका कुराले केही दिन अप्ठेरो जस्तो देखिएको भए पनि अहिले बिस्तारै लय लिएको छ । आपसी तालमले स्वभाविक भए पनि दुईपार्टी बिचमा चुनावी तालमेलसहितको एकतासम्ममा पुग्नु कठिन काम हो । एउटै पार्टीमा त उम्मेदवार मिलाउन कति कठिन हुन्छ, दुई पार्टी बिचमा मिलाउन निकै कठिन थियो । त्यो हामीले मिलायौँ । अब नमिल्नु पर्ने विषय केही छैन् ।
माडी पुग्दा पनि बाँदरमुढे घटना पीडितलाई किन नभेटेको भन्ने गुनासो छ नि ?
माडीमा तय भएको कार्यक्रममा हामी पुग्नु पहिल्यै पार्टीका नेता अमिक शेरचनसहितको टोली पुगेर पीडितसँग कुराकानी गरेको अवस्था हो । मैले त्यही बेला माडीको कार्यक्रममा बाँदरमुढे घटनाको विषयलाई फोकस गरेरै बोलेको छु । म फेरि माडी जाँदै छु । माडीको बाँदरझुलामा मंसिर ४ गते पुग्ने योजना छ । म पीडितलाई भेट्छु ।
ठाउँठाउँमा बम प्रहार भएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? सरकारले नै परिचालन गरेको भन्ने आरोप समेत लगाउनुभयो, आधार के हो ?
यो राम्रो काम होइन् । यसलाई मैले थ्रेटको रुपमा बुझेको छैन् । विप्लव समूहबाट माओवादी केन्द्रमा धेरै आए । केन्द्रीय सदस्यसहित हजाराैँ आए । रोल्पा, रुकुम जस्ता जिल्लामा आतकंको अवस्था छ । ढुंगा, मुडा, ग्रीनेड, बम प्रहरा भएका छन् । त्यति ठूलो होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अलि कठिन रोल्पा, रुकुममा हो । कांग्रेस र विप्लवसँग साँठगाँठ भएको रिपोर्टिङ आएको छ ।
त्यो क्षेत्रमा हतियारसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई तत्काल छुटाउन त्यही क्षेत्रमा मन्त्रीले विज्ञप्ती जारी गर्नुले थप शंका पैदा गरेकै हो । केन्द्रमा रहेको कांग्रेस भन्दा स्थानीय स्तरमा रहेका कांग्रेसबाट केही समस्या भएको हामीले बुझेका छौँ । हामी प्रधानमन्त्रीलाई यो नियन्त्रण गर्न अनुरोध गर्छौँ । तालमेल जो सँग पनि गर्न पाइयो तर आतंक मचाउन पाइन्न ।
दुई पार्टीबिचमा वाद फरक छ, विचार फरक छ, त्यो कसरी मिल्ला ?
मान्छेको लागि सिद्धान्त हो, सिद्धान्तका लागि मान्छे होइन । मिल्ने कुरा मिलाउने, नमिल्ने कुरा हटाउने । समाजवाद, शान्तीपूर्ण प्रतिस्पर्धा, आर्थिक समृद्धि नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसमा नमिल्ने विषय केही छैन । माओवादको विषय हो । यसलाई महाधिवेशनसम्म लैजान सकिन्छ । हिजो प्रचण्ड पथ थियो । त्यसलाई स्थगन गरेर राखिएको छ ।
अब सिद्धान्तको पछि लागेर राष्ट्रलाई दुःख दिने होइन सिद्धान्तभन्दा राष्ट्र र नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । राष्ट्र र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सिद्धान्त मिलाउँदै जानु पर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद सम्भव भएको भन्दै उहाँले नेपालमा आर्थिक समृद्धीमा केन्द्रीत हुनुपर्ने र सिद्धान्त मिलाउँदै लान सकिन्छ ।